Ibhegi ye-Cosmetic Factory-i-China Cosmetic bag Abavelisi, ababoneleli
Imibala ye-Candy yesikhumba yebhegi yokuthambisa ye-makeup bag enokuvalwa kwe-zipper imibala emi-2 ekhoyo yepencil pouch umququzeleli we-toiletry bag enkulu enomthamo isipho esikhulu samantombazana aselula abasetyhini
Ukungafihli kucace gca kunye nebhegi enemibala yePVC yesandla ibhegi yokuthambisa ibhegi eneqhosha elivaliweyo 2 imibala ekhoyo yomququzeleli yangasese ibhegi enkulu enomthamo isipho esikhulu
Ukungafihli kucace gca kunye nebhegi enemibala ye-PVC yesandla ibhegi ye-cosmetic yebhegi yokuthambisa ene-hold-on holder slot 2 imibala ekhoyo yesiququzeleli sebhegi yangasese
Ukungafihli jonga emacaleni athandekayo okusonga iribhoni yesikhumba ibhegi yokuthambisa ye makeup evalwe ngeziphu imibala emi-3 ekhoyo isingxobo somququzeleli
Ukungafihli jonga emacaleni okuthandeka okusonga iribhoni yesikhumba ibhegi yokuthambisa eneziphu evaliweyo imilo emide yetyhubhu emi-2 imibala ekhoyo yesiququzeleli isingxobo sangasese
Ibhegi yokuhombisa eneziphuphu ezivaliweyo ezinemibala emi-3 ekhoyo yengxowa yangasese ekhoyo.
Umbala oqinileyo we-PU wesikhumba webhegi yokuthambisa eneziphu zokutsala imibala emi-3 ekhoyo yomququzeleli yangasese ibhegi enkulu enomthamo isipho esikhulu samantombazana aselula abasetyhini.
Ipolyester yokuluka ipateni yesikhumba se-PU yesikhumba se-cosmetic ibhegi yokuhombisa enokuvalwa kwe-zipper ene-drawstring 3 imibala ekhoyo yomququzeleli ye-toiletry bag enkulu isipho esikhulu samantombazana aselula abasetyhini.
Uyilo lwefashoni olulungiselelweyo ILogo iqokobhe imilo eluka ipateni yePU yesikhumba yepolyester yokuthambisa ibhegi yokwakheka eneziphu evaliweyo ene-drawstring 3 imibala ekhoyo yomququzeleli yangasese ibhegi enkulu enomthamo isipho esikhulu samantombazana aselula abasetyhini.
Shinny umbala we-polyester yokuthambisa ibhegi yokuhombisa ene-zipper evala ipokotho esecaleni 3 imibala ekhoyo yomququzeleli yengxowa yangasese enkulu enomthamo isipho esikhulu samantombazana aselula abasetyhini.
I-Rivet yegolide kunye nepokotho emhlophe ye-zipper yangaphambili ye-PU yesikhumba ye-makeup pouch ene-zipper evaliweyo 2 imibala ekhoyo yomququzeleli yangasese ibhegi enkulu enomthamo isipho esikhulu samantombazana aselula abasetyhini.
Iqokobhe elikhazimlayo elipinki imilo yebhegi yokuthambisa eneziphu ezivala iziphu umququzeleli wethoyilethi ibhegi enkulu enomthamo isipho esikhulu samantombazana aselula abasetyhini.